🥇 ▷ Toddobaadka Xagaaga Maamuusta: hirar dhimis laga bilaabo 23 illaa 27 Luulyo HiHonor iyo 30 € tigidh lagu sharfo 10 ✅
Waxaan gadaal uga tagnay maalinta ‘Prime Prime Day 2018’, laakiin taasi micnaheedu maahan in fursadihii lagu badbaadin lahaa qalabyada tikniyoolajiyada aadka loo jecel yahay ay dhammaadeen. Tusaale ahaan, Sharaf waxay diyaar u tahay inay iyada billowdo Toddobaadka Xagaaga, todobaad dhimis on casriga ah iyo waxyaabaha lagu dhejiyo dukaanka internetka HiHonor, intii u dhaxeysay 23 iyo 27 Luulyo.
Soo-jeedinta ugu xiisaha badan waxay quseyn doontaa calanka cusub ee astaanta Shiinaha: Nooca sharafta 10 128 GB oo ah xusuusta gudaha (iyo dhammaan midabyada la heli karo) ayaa diyaar looga noqon doonaa iibsashada qiimaha 419,90 € (bedelkii € 519.80), sidoo kale ka faa’iideysiga khaaska ah kuuban qiimaha xayeysiinta ah 30 €, oo u baahan kara dhan isticmaaleyaasha cusub ee HiHonor taas ayaa isdiiwaangelin doonta inta u dhaxaysa 18 iyo 27 July.
AKHRISO: Huawei Mate 10 Pro vs Honor View 10, isbarbar dhigteen
Laakiin waxyaabaha kale ee la beddeli doono ma maqnaan doonaan: waxa ugu macaan ee wali taagan Honor View 10, kaas oo laga heli doono qiimaha 419,90 € midab buluug iyo casaan leh oo leh xusuus goyn 6/128 GB, laakiin waa inaan sidoo kale la dhayalsan Mudane 9 Premium, 9 Lite, 7X, 7C waa 6A. Qalabka waxaa ka mid ah, waxaan ka heleynaa dhagaha dhagaha Daanyeer iyo Isboortiga Bluetooth, Sharafta Band 3 iyo daboolka xayeysiinta sharafta 10. Ka raadi macluumaad dheeri ah bogga dhacdooyinka websaydhka HiHonor.